Mihamaro ireo LGBT Japoney no Mivoaka avy any amin’ny Miafina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2015 8:27 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 日本語, Español, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, русский, English
Pikantsary: 1 amin'ny 13 no manondro tena ho LGBT (“vitsy an'isa ara-pananahana”). Nindramina tamin'ny NHK
Fitsapa-kevitra an-tserasera iray nataon'ny orinasa iraisampirenena iray sy ny goavan'ny mpanao dokambarotra Dentsu no nahitana fa iray amin'ny Japoney 13 (7.7%) anelanelan'ny taona 20 ka hatramin'ny 59 no manondro tena ho lesbiana, gay, biseksa ary nanova taovam-pananahana (LGBT). Azo anontaniana ato ny valin'ny fitsapan-kevitra amin'ny teny japoney.
Nisy fiakarany izany isa izany raha jerena ny valin'ny fitsapan-kevitranataon'ny Dentsu tamin'ny 2012, raha ny 1 amin'ny 19 tamin'ny namaly no nanondro tena ho LGBT.
Ny fitsapan-kevitra tamin'ny Avrily 2015 dia nivoaka iray volana monja taorian'ny nankatoavan'ny tanandehibe maro ao Japan ny mariazy sivilin'ny mitovy taovam-pananahana, sy tamin'ny fotoana ametrahan'ny Minisitera Japoney misahana ny Fanabeazana fandaharana vaovao mampiroborobo ny fahasamihafana ao amin'ny fiarahamonina Japoney.
Tamin'ny vaovao hafa nivoaka tamin'ny 2015, voasingan'ny sampandraharahan-dokambarotra Dentsu ihany koa ny fitomboan'isan'ny mpanjifa avy ao amin'ny fiarahamonina LGBT ao Japan amin'ny fandaniana 5,94 arivo miliara yen ataony ao anatin'ny taona iray (tokotokony ho 50 miliara dolara amerikana).
Ho famaritan'ny Dentsu fa manondro tena ho LGBT ny 7,7% -n'ny Japoney, dia nanao fakan-kevitra tamin'olona 70.000 tamin'ny alalan'ny aterineto izy tamin'ny 7 sy 8 Avrily 2015. Notaterina araka ny sokajin-taona ny valiny :
Rehefa nanontaniana ny taona nahatonga saina azy ireo hanondro tena ho gay, lesbiana, biseksa na nanova taovam-pananahana, ny 18,6% (ny betsaka indrindra tamin'ireo namaly) nilaza fa tanelanelan'ny taona 13 sy 15. Aorian'izany, ireo nanondro tena ho LGBT talohan'ny taona faha-6 ny vondrona manaraka manana isanjato 17.2%. Ny 16%-n'ny mpamaly nilaza fa nanondro tena ho LGBT ry zareo tenelanelan'ny taona 10 sy 12. Ny 9.8%-n'ny mpamaly kosa nanondro tena ho LGBT taorian'ny faha-40 taona. Ny 56.8%-n'ny valiny tamin'ny fitsapan-kevitra dia tsy namoaka mihitsy ny fotoana voalohany naha-LGBT azy ireo.
Manakaikikaiky izany fotoana izany, Fumino Sugiyama, izay nanovany tenany ho lehilahy izay efa mpilalao sabatra teo aloha tao amin'ny ekipam-pirenena vehivavy, dia naneho hevitra tamin'ny vaovao fa hanomboka hizara sertifikà mankatoa ny fifanambadian'ny mitovy taovam-pananahana i Shibuya Ward avy ao Tokyo. Raha niteny tao amin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Klioban'ny Masoivohon'ny [gazety] vahiny ao Japana tamin'ny 23 avrily, nilaza i Sugiyama:
Tiako ampahafantarina ny vahoaka fa misy ny olona manondro ny tenany ho LGBT (“vitsy an'isa ara-pananahana,” 性的少数者) mifanolobodirindrina amintsika.
Sugiyama, teraka vehivavy, nilaza fa nahanfatatra ny mari-panondroana mahalehilahy azy tao amin'ny garabola ary nitomany foana fahazaza satria tsy tiany ny nanao zipo. Nivoaka i Sugiyama avy eo ho lasa mpandraharaha mahomby, mpilatro ara-damaody, mpampiala voly ary mpitondratenin'ny fiarahamonina LGBT ao Japana.
Indro ny valandresaka iray manontolo tao amin'ny FCCJ manasongadina ny fanamarihan'i Sugiyama:
Valan-dresaka ao amin'ny Klioban'ny Solontenan-Gazety Vahiny ao Japana – Fumino Sugiyama.